7 xogta soo kabashada card VS Wondershare Data Recovery
Waa kuwee waa ka wanaagsan yahay soo kabashada card 7 xogta VS Wondershare Data Recovery.
7 xogta soo kabashada card
Waxaa loo sameeyay dadka nooc kasta oo dib u soo kabashada soo kabashada card 7 xogta waa mid ka mid ah kuwa barnaamijyada la heli karo oo lacag la'aan ah internet-ka iyo marka ay timaado lacag la'aan ah wax ku oolnimada iyo waxtarka ka baxa suuqa kala. Sidaas soo kabashada card 7 xogta inkastoo ay isticmaalaan tobanaan kun oo dadka inta badan, sababtoo ah waa lacag la'aan ah ayaa ku guuldareystay t heli natiijada jeclaystay user ee arrintan la xiriira. Waa mid ka mid ah kuwa barnaamijyada in inta badan marnaba la joogo 100% natiijada in dadka isticmaala oo u dhan waxaa sabab u ahaa xaqiiqada ah in dadka ma awoodaan in ay helaan dib u soo kabashada hab ugu fiican. Sidaa darteed waxaa looga baahan yahay dadka isticmaala si aad u hesho oo ugu wanaagsan ee barnaamijyada ugu dadaala in arrintan la xiriira iyo illoobin jir qalaad ee qabanqaabiyey oo aan ahayn in ay u adeegaan ujeedada haatan awood ay sabab u tahay horumarinta degdeg ah ee technology. 7 kabashada card xogta waa in kasta oo ka shaqeeya si loo hubiyo in dadka gudahood suuqa u hesho aqoon wanaagsan ee wax soo saarka, laakiin xaqiiqada dhabta ah waa in ay ka fog oo gaarey heerka macaamiisha ku qanacsan tahay in la filayaa in arrintan la xiriira yihiin. 7 xogta soo kabashada card ayaa dhanka kale wuxuu sidoo kale leeyahay xoog leh macaamiisha saldhig laakiin nasiib daro macaamiisha intanu waa kuwii ay awoodi karaan inay ka soo kabsadaan doodiisa yar oo xogta iyo marka ay timaado file ballaaran ama kabashada xogta weyn ka dibna waxaa lagu talinayaa in aan la isticmaali barnaamijkan .
Wondershare Kabashada Data t
Dhinaca kale Wondershare kabashada Data la yimaado muddo free maxkamad in uu yahay kan ugu horreeyey iyo faa'iido ugu horreeyey ee isticmaalka sheyga sida ay hubineysaa in go'aanka kama dambaysta ah ee qofka macaamilka ah waxaa wasaqaysanna leh habka ugu fiican. Waxaa sidoo kale in la xuso in ay dib u soo kabashada Wondershare Data arrintan la xiriira weliba hubinayaa in natiijooyinka ugu fiican ayaa la siiyaa si user ah si ay u awoodaan in ay helaan dib u soo celinta xogta 100% ama xitaa u dhow waxa ay kala yihiin. Barnaamijka waxaa hubaal ah ma aha lacag la'aan ah, laakiin ay timaado la updates uu nool yahay mar qadar yar oo maalgashi ee gobolka taas oo ah barnaamijka farshaxanka. The horumarinta oo ka mid ah soo kabashada Wondershare Data sidoo kale in la hubiyo in faylasha dambeeyay waa isbedelka lagu daray oo ka duwan 7 kabashada xogta Wondershare kabashada Data taageertaa ilaa 550+ qaabab in la soo kabsaday karo oo dib loo soo celiyo hab ugu fiican. Sidaas darteed waa barnaamij ka mudan tahay wax iibsiga iyo user waa in la hubiyo in natiijooyinka ugu fiican laga helo arrintan la xiriira marka ay timaado soo kabashada xogta sida barnaamijka la dhisay si ay u helaan kama dambaysta ah qancinta macaamiisha ka dhigi. Laga soo bilaabo yar yar in ay dib u soo kabashada file waaweyn Wondershare kabashada Data ayaa xaqiijiyey in adeegyada ugu fiican waxa loo dhiibaa macaamiisha ah si haddii uu jiro waqti soo socda ka dibna barnaamijka uu noqdo doorasho kama dambaysta ah ee user in marna hubaal bedelay arrintan la xiriira.
Uqaabeeyaan iyo magacyada
Xaaladaha ay taageerayaan
Wondershare Kabashada Data
Easy in ay isticmaalaan iyo dayactirka looma baahna
Dhammaan qalabka lagu keydiyo iyo noocyada ay taageerayaan
Dhamaan xaaladaha waaweyn iyo wax caadi ah oo ay taageerayaan
Nooca file 550+ taageeray
Qalabka oo dhan oo ay taageerayaan
Interface soo jiidasho leh oo lacag la'aan ah
Taageero qalab lagu kaydiyo Limited
Caadi xaaladood ayaa la beegsaday
Noocyada file Limited ku daray in uu yahay 100 ilaa ugu badnaan 250
Aad soo kabsado xogta ka kaarka xasuusta la Wondershare Data Recovery
Waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka qalab tahay in loo isticmaali karo si loo hubiyo in xogta la soo kabsaday hab ugu wanaagsan oo ugu danbeyn user helo natiijada ugu fiican ee arrintan la xiriira ka. Waa in la ogaadaa in barnaamijka uu loogu talagalay si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan u dhac kasta oo aan iyo sidoo kale helo natiijada ugu wanaagsan. Interface ee barnaamijka waa mid aad u fudud in la isticmaalo iyo xitaa user a laylis hubiso in natiijada ugu wanaagsan waxaa lagu helaa arrintan la xiriira ka dhigi kara. Si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan waxaa lagu talinayaa in la hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah geeddi-socodka tahay in lagu Xusi hoos ku isollowed si user ah ma aha oo kaliya helo natiijada ugu wanaagsan, laakiin sidoo kale waa inuu xaqiijiyo in ay state of shaqeynta tahay barnaamijka la laftiisa goob joog si aad u hubiso in user uu noqdo xubin joogto ah bulshada dib u dhac kasta oo aan:
1. user wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in URL http://www.wondershare.com/data-recovery/guide.html waxaa browsed si barnaamijka la soo bixi, rakibay oo bilaabay:
2. nooca file waxaa ka dibna mar kale la soo xulay si ay u hubiyaan in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah geeddi-socodka tahay keenaysay in arrintan la xiriira:
3. goobta file waa in markaas la cayimay si loo hubiyo in search lala beegsaday ayaa la sameeyaa oo markii ugu user ay la socdaan khayraadka nidaamka la badbaadiyey si weyn u kordhin,
4. Marka files ah ayaa la helay user waa in ay hubiyaan in kuwa loo baahan yahay in la soo kabsaday ayaa la soo bixiyay iyaga oo sax sameeyaan ka dibna ku soo kabsado button la isku soo riixayo in arrintan la xiriira. Waxaa kale oo uu saamaxayaa user in la baaro files si dhow si wixii kaloo la samayn karaa iyada oo aan wax arrintan iyo dhibaatada:
Soo qaado aad ugu jeceshahay software kabashada xogta
Iyada oo ku saleysan miiska iyo falanqaynta in la sameeyo arrintan la xiriira waxa ay si ammaan ah loo arkaa karaa in Wondershare Data Recovery waa ikhtiyaarka ugu fiican in user ah waa in u tagto si aad u hubiso in soo kabashada xogta la sameeyo waa hubaal. Qalabka free marnaba lagu kalsoonaan karo si kabashada card 7 xogta marna lagu taliyey iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in software-ka waa mid aad u adag in la isticmaalo iyo sida loo barbar dhigo Wondershare Data Recovery waa zilch marka la eego wax qabadka iyo soo saarista file.
Soundtap Streaming Audio Recorder u Mac OS X EL Capitan
Sida loo kaabta iyo Soo Celinta aad SMS BlackBerry
> Resource > Ladnaansho > Waa kuwee waa ka wanaagsan - 7 kabashada card xogta VS Wondershare Data Recovery